संसारका पाँच महंगा शेयर, किन्ने हो ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
संसारका पाँच महंगा शेयर, किन्ने हो ?
१२ भाद्र २०७४, सोमबार १०:२१
बर्कशायर हाथवे (Berkshire Hathaway)
वारेन बफेटको कम्पनी बर्कशायर हाथवे इंकको शेयरको मुल्य संसारमा सबै भन्दा बढी छ । यसको एक क्लास ए शेयरको मुल्य २,१६,२२० डलर रहेको छ ।
सीबोर्ड कर्पोरेसन (SEABOARD Corporation)
सबै भन्दा धेरै मुल्य भएको शेयर सीबोर्ड कर्पोरेसनको हो । यसको एक शेयरको मुल्य ३,४४० डलर रहेको छ ।
एनवीआर इंक (NVR Inc)
संसारमा सबै भन्दा बढी महंगो शेयर मध्य एनवीआर इंक कम्पनीको पनि हो । यसको मुल्य १,०९२,४० भारु छ । यो कम्पनी होम बिल्डिङ् र हाउजिङ् लोन बिजनेश संग जोडिएको छ । यसले पछिल्लो समय अमरिकामा 3,65,000 घर बनाएको थियो ।
प्राइसलाइन ग्रुप (Priceline Group)
यो समुहमा चाैथो नम्बरमा प्राइसलाइन ग्रुप रहेको छ । यो कम्पनीको एक शेयरको मुल्य 1,471.49 डलर रहेको छ । यो कम्पनीले कस्टमरलाई एअर टिकट र होटलका कोठाहरुमा छुट दिलाउने कार्यमा मद्दत गर्द छ । प्राइसलाइन इंक १९९७मा जे एस वॉकरले सुरु गरेका थिए ।
मार्केल कर्पोरेसन (MARKEL Corporation)
सबै भन्दा धेरै मुल्यको पाच नम्वरको शेयर मार्केल कॉर्पोरेशनको हो । यसको एक शेयरको मुल्य 61,685 रहेको छ । यो एक फाइनान्सियल होल्डिङ् कम्पनी रहेको छ । जसलाई १९३०मा अमेरिकाका वर्जीनिया में सैमुअल मर्केलले शुरु गरेका थिए ।
प्रकाशित : १२ भाद्र २०७४, सोमबार १०:२१